Inguqulo 0.3.8 – Ulimi Ukuthola
December 20, 2009 by okunikezwayo Shiya amazwana
Le nguqulo unezela lesi ukubona izilimi izivakashi website (ngokusekelwe sezingxoxo isiphequluli – geoip ingafakwa wanezela uma ngesithakazelo ngokwanele uyoboniswa). Iphinde isekela entsha `rel = eBhayibheli` in the wordpress entsha (2.9) okuyinto wadedelwa izolo. I share kokujwayelekile Bugfixes assorted nazo lapha. Futhi aphinde sifuna ukubonga Kevin Hart usizo lwakhe.
Lena yi-version wokugcina ukuze ngokomthetho ukusekela wordpress 2.7, njengoba singathanda esikhundleni ukuchitha izinsiza zethu kuphela kwi ngcono ukwedlula ukusekela base endala ikhodi. Ukuze ubani ngokusebenzisa wordpress elidala esinawo iziphakamiso ezimbili: 1. ngcono. noma 2. sebenzisa i transposh ukukhululwa elidala. Uhlelo for ikusasa liyoba ezifanayo, once WordPress 3.0 uzobe out sizothola lehle ukuxhasa 2.8. Noma imaphi izimvo ngalolu zizosiza.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: minor, ukukhululwa, RSS, wordpress 2.8, wordpress 2.9, plugin wordpress
Inguqulo 0.2.4 – Siyakwamukela wordpress 2.8!
June 9, 2009 by okunikezwayo 5 Amazwana
Le ukukhululwa entsha wamukela ukukhululwa ukufika wordpress entsha 2.8. Le ukukhululwa kuhlanganisa nokweseka the imibhalo at ubuso phansi 2.8 okuyinto kuzokwenza amakhasi akho ukulayisha ngokushesha futhi uthole amaphuzu aphezulu ne Yslow Yahoo sika. Kuhlanganisa amathani bug fixes, iningi esiphawulekayo iyona fix for themes angikwazanga futhi singathanda ukubonga Karl usizo lwakhe ekuqondiseni ngikhiphe okuyiyona. Sithanda futhi ukubonga Mike usizo lwakhe ngo ukulungisa iphutha inkinga neticalo okuyinto kuvinjelwe umlando kanye nezibalo kusuka ukusebenza kahle. Nokuba uqaphele wukuthi olunye ulimi RSS feed kumele basebenze manje.
Sithemba uyophila lokhu ukukhululwa – futhi njengoba ngaso sonke isikhathi – thina ukujabula lapho imibono yakho
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: minor, ukukhululwa, RSS, wordpress 2.8, plugin wordpress